Svenska Burmesiska översättning | HTML Translate | Gratis online översättning & ordbok | OpenTran
Svenska Burmesiska översättning
En dejt ရက်စွဲ
I parken ပန်းခြံမှာ
Hur man kommer till apotek ဆေးဆိုင်ကိုဘယ်လိုသွားရမလဲ
Var bor du? သင်ဘယ်မှာနေလဲ?
Min favorit typ av sport အားကစားငါ့အကြိုက်ဆုံးမျိုး
Läkarens kontor ဆရာဝန်၏ရုံးခန်း
Min favoritförfattare ကျွန်ုပ်အကြိုက်ဆုံးစာရေးဆရာ
Första dejten ပထမနေ့
Mellan klasskamrater အတန်းဖော်များအကြား
Vad kan jag få som en present till en vän på födelsedagen? မွေးနေ့အတွက်သူငယ်ချင်းအတွက်လက်ဆောင်တစ်ခုအနေဖြင့်ရရန်။